Wzx tsy misy seamless feno shaper camisole shapeWear wholesale manamboatra
Wzx Seamless Underwear orinasa / mpanamboatra Scarewear Support OEM / ODM / Wholesale ambany Moq Oder. Acpet Custom Label / Logo manokana.
Mifehy ny panty
Bra nursing bra
Mitafy lamba mavitrika
Gym an-tsokosoko tsy misy dikany
Leggings vita amin'ny fomba
Vaovao momba ny vokatra WZX
an-trano > NEWS > Vaovao momba ny vokatra WZX
WZX Open-bust Mid-Thigh Bodysuit Body Body Body
Wzx Seamless PlaceWear Company avo lenta an-tsokosoko
Wzx Custom dia nanao setroka vita amin'ny seamwear
WZX Wholesale Boods Shaper Distributors azo zahana amin'ny tadiny
Tian'ireo mpanjifanay ny fomba ahazoana aina tsara sy mora ampiasaina. Ny lamba matevina dia manome ny habetsaky ny valahany avo lenta tsy misy ahiahy raha tsy mahatsiaro tena. Atsangano ny tummy / satroka mifehy. Ny endrika vatana matevina dia tazonina. Ny fehikibo fehikibo avo be dia be ho an'ny vehivavy dia hihatsiravina ny vatom-bary sy ny fifehezana vatana.
WZX - Mpanamboatra orinasa Seamless Cofless
Shantou Wanzhanxing akanjo co. Ltd. dia orinasa voamarina bsci, chinaMpanamboatra Wholesale, orinasa ambony plaste shorewear, mandrakotra ny 10 500 metatra metatra toradroa. Ny orinasa dia manantitrantitra ny foto-kevitry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana raha mampiasa ny teknolojia mandroso indrindra hanomezana serivisy ho an'ny marika. Nanome izahayOem&Serivisy ODM Ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao, Etazonia, UK, ca, au, de, sns izay azonay atao ho anao:
1.Manao manamboatra vokatra arakaraka ny zavatra takinao
2.Mahafaly haingana ny santionany ary hanafaka azy ireo ao anatin'ny 7 andro.
3. Azontsika atao ny manamboatra ny famantarana ho an'ny tarika misy anao.
4. Azontsika atao ny manamboatra ny loko tianao.
5.Manao ny vokatra miampy habe amin'ny haitao tsy misy teknolojia.
6. Azontsika atao ny manamboatra ireo modely tadiavinao.
Masinina Seamless Santoni
Amin'ny fampifangaroana kofehy samihafa amin'ny teknolojia tsy misy tomika, ny vokatra dia manana fiasa manokana sy endrika endrika miloko marevaka.
Ny milina ao amin'ny atrikasa fanjaitra dia avy any Japon ary ampidirin'ny mpiasa manjaitra za-draharaha.
Manana departemanta fanintonana mafana izahay, izay manome serivisy famantarana famantarana famindrana hafanana.
Ekipa zokiolona, ​​miaraka amin'ny fahaizan'ny fampandrosoana ny vokatra mahaleo tena, kitiho ny mety ho an'ny tsena.
Firenena / Faritra
Olona ara-dalàna Enterprise
Mpiasa amin'ny mpiasa
Ny sandan'ny famoahana isan-taona
Araraoty ny fahalalanay sy ny traikefanay tsy manam-paharoa, manolotra anao ny serivisy fanamboarana tsara indrindra izahay.
Ahoana no hanatonantsika sy hamaritantsika an'izao tontolo izao
Ny zavatra voalohany ataonay dia ny fihaonana amin'ireo mpanjifanay ary miresaka momba ny tanjon'izy ireo amin'ny tetikasa ho avy.
Mandritra ity fivoriana ity dia aza misalasala mampita ny hevitrao ary mametraha fanontaniana maro.
Izy rehetra dia amboarina araka ny fenitra iraisam-pirenena henjana indrindra. Nahazo sitraka avy amin'ny tsena anatiny sy ivelany ny vokatray.
Ankehitriny dia manondrana any amin'ny firenena 200 izy ireo.
Ny endriky ny flatientsika dia mampiditra asa tanana tsy misy fepetra 360 degre. Miaraka amin'ny teknolojia fanodinana farany, ny Powernet amin'ny sosona ivelany dia miantoka ny fifehezana ny faritra mikorontana. Ny micro-fiber dia manolotra fahatsapana maivana sy fofonaina. Ireo kiraro panty panty ireo dia afaka manampy hanamora ny ambany sy hampiakatra ny volanao. Ny famolavolana familiana feny dia miantoka amin'ity morontsiraka ity dia tsy hihodina na hiakatra. Vokatr'izany, ny shaper tokana dia natao tsara tsy misy zipper na hoho ary maso ao amin'ny faritra misy anao, noho izany dia manome korontan tsara ianao ary manampy anao hahita akanjo tsara tarehy!
Ny panty mpanelanelana dia vita amin'ny ambaratonga ambony fitaovana, tena malama& malefaka& Ny fahamendrehana mahasalama sy ny hamandoana dia avelao ny hoditrao mifoka rivotra malalaka. Ity bodysuit ity dia mampiasa famolavolana panties sexy miaraka amin'ny fehin-kibo matevina mba hamolavola anao mandritra ny fotoana rehetra ary tsy misy tsipika panty tsy mahafinaritra, hiantoka ny mifanaraka amin'ny karazana vatana amin'ny lafiny rehetra, ny Torso / fohy fohy rehetra dia mifanaraka tsara. Mamaivana ny fahazavana mba hahatrarana mandritra ny andro.
Ny shaper Shaper Sharts dia tsy misy tomika miaraka amin'ny teknolojia tsy misy silika sy malefaka! Na sitrana amin'ny postpartum ianao, dia mitafy akanjo, na miala voly ao an-trano ... ny endriky ny endritsentsika dia maivana sy fofonaina ary mijanona eo amin'ny toeranao na inona na inona ataonao. Mahatsiaro ho tohanana sy miorim-paka amin'ny toerana tsara rehetra. Namboarina mba hikoropaka ny tadinao, ny fonao ary ny lamosinao. Ny hentitra sy ny fanakorontanana ny shots ataontsika dia mahatonga anao hahatsapa ho tonga lafatra.
Ity bodysuit plaste bodysuit ity dia vita amin'ny fitaovana malefaka sy milamina mba hametahana ny tavyo. Ny famolavolana avo lenta dia mihena fehikibo mamorona slhouette feminiana.3d manapaka ny volavolan-dalàna momba ny famoaham-bola hip fanerena hip, omeo anao ny tarehimarika tadiavinao, ampio ny refy hip, a Fitaovana sy fifehezana voajanahary. Ny soroka dia vita amin'ny malemy tavy mba handraisana ny bokotra miovaova, mampandeha ny valahanao, Sexier sy tsara tarehy kokoa.
Wzx tsy misy tonon-kena tsy misy tohana an-tongotra
Ny famolavolana havoana avo lenta U-endrika dia ahafahanao manana toerana manan-karena, araho ny fiovan'ny vatanao ary hijanona ao aminao mandritra ny fitondrana vohoka. Manome fanampiana malefaka ny leggings, manampy amin'ny fisorohana ny fanaintainan'ny lamosina, hanamaivana ny tsy fahatomombanan-tsofina amin'ny pelvika ary hanatsara ny posture. Ny hateviny mety, ny porofon'ny squat-non see-thru, fanjaitra mahafinaritra miaraka amin'ny fanoherana ny vazaha, malefaka, dia manome aina anao foana. Ny pataloha manan-danja dia vita amin'ny lamba 4-làlana, fofonaina sy hatsembohana ary hatsembohana, akaikin'ny vatana tsy misy famerana, azonao atao ny mankafy ny fahalalahana mihetsika na dia bevohoka aza ianao na dia bevohoka aza.
Wzx Seamless Control Sharecear Manufacturer Slimming Body Shaper Underwear
Ireo bras fanatanjahantena tsy misy fotony ireo dia vita amin'ny nylon sy spandex. Ny lamba dia mahazo aina sy malefaka, mifandray akaiky amin'ny hoditrao, tsy misy tsy fahatomombanana, tsy misy feta, tsy misy moka ary manoritra.
Wzx Shapwear Private Label Wholesale mpamatsy slike
Ity bodysuit tsy misy fotony ity vehivavy ity dia mampiasa endrika famolavolana seamless 70 ° ary mahazo aina, tsy misy tonon-taolana na tariby, izay amim-pahamendrehana, ary tsy hadinonao ny satroka cincher cincher. Feno vatana mamolavola amin'ny fiakaran'ny fampakaram-badinao / jumpsuits / akanjo / zipo / pataloha / pataloha, tsy misy tsipika hita eo ambanin'ny akanjonao. Ny famoretana hentitra sy ny fifehezana ny tony, omeo curve malefaka ianao.
Ny fikosoham-bary mofom-bolo wzx dia mametaka ny endriny tsara tarehy tsara indrindra
Ny famolavolana seamless miaraka amin'ny tarehimarika feno hatsaram-bidy sy fofonaina, misoroka ny fako ny fako, ary tsy ho hita. Ny tsy maintsy manana fototra, mitafy ny endriky ny voromahery isan'andro eo ambany fitantam-bolo na zipo, ampio ny zavatra malefaka ary tsy manana olana amin'ny fihodinana. Ny tsiambaratelo sy ny setroky ny valan-javaboary mety, mitafy sy aorian'ny fitondrana vohoka, ny tonon-jaza, dia manome ny fanohanan'ny kibo ary milamina tsara.
Tsara kokoa ny raharaham-barotra tsara kokoa
Mifandraisa amin'ny varotra amin'ny XXXXX